Ọnụ ụzọ metal-plastic
N'ụlọ ọ bụla, a na-akwụ ụgwọ uche pụrụ iche maka otu ihe dị mkpa dị ka ọnụ ụzọ. Ụdị dịgasị iche iche ha dị iche iche dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ndị osisi na-emebu osisi. Enwere ike ihicha ha, ma tinye ya, ma gbaa ya ọkụ, ọchịchịrị na ìhè. N'ezie, ọ dịghị ihe dịka ịma mma nke osisi okike, ma mgbe ụfọdụ, ụdị ngwaahịa ndị ahụ (ọnụ ụzọ, karịsịa), nke ga-eme ka ọchịchọ ndị ahụ dịkwuo mkpa maka ike. Na nke a, a na-eji ígwè arụ ọrụ na-edochi ụzọ ụzọ. N'ụzọ ezi uche dị na ha, ha, adịghị, dị irè, kama ọ dị ike karịa osisi. Ma! Ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-enye ndị na-azụ ahịa ohere ịṅa ntị n'ọnụ ụzọ nke oge a - ọnụ ụzọ ígwè-plastic. Ihe ha na-eme bụ na ha na-ejikọta àgwà kachasị mma nke ọnụ ụzọ osisi na ígwè .
Ụdị ígwè ụzọ plastik
Dabere na saịtị echichi ahụ, a na-ekewa ụzọ ụzọ metal-plastic na atọ. Ọnụ ụzọ nke ọ bụla nwere ụdị nke ha nwere - dị iche iche profaịlụ shutter, ọnụnọ (enweghị) mgbakwunye ndị ọzọ, ntinye nke otu ma ọ bụ ọzọ ihe mgbakwunye. Ihe ole na ole gbasara nkọwa ọnụ ụzọ ọ bụla.
Ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ metal-plastic . Ebe ọ bụ na isi ọrụ nke ọnụ ụzọ mbata bụ nchebe a pụrụ ịdabere na ya site na ntinye na-enweghị ikike, ọnụ ụzọ mejupụtara plastic-plastic na ụdị a bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya. A na-emepụta ntọala ha (etiti) site na iji mgbakwụnye aka, nkwonyere (aka, mkpuchi, wdg) na-enye nrụgide siri ike na gburugburu ebe nchekwa dum. Ejiri ngwaọrụ nchara. / li>
Okporo ụzọ ọnụ ụzọ metal-plastic . Ọrụ ọrụ ha doro anya site na aha ahụ. A na-emepụta ọnụ ụzọ ndị a dị ka windo, ha nwere ụdị akwa ahụ, na-eme ka ihe dị mma nke akwukwo akwukwo na etiti. Ọ dị mma ịnagide okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi. Dabere na ọkacha mmasị nke onye ahịa, ha nwere ike ịmepụta kpamkpam site na otu okpukpu abụọ ma ọ bụ bụrụ nke opaque - nke e ji sandwich mee. Ọtụtụ na-ejikarị ngwakọta na - ejikọta - elu nke windo okpukpu abụọ ahụ, ala nke panwichi sandwich opaque. N'akụkụ nke ụlọ ahụ a kwadebere ya na ngwaọrụ nwere mkpọchi na ogwe aka na azụ.
Ọnụ ụzọ imepụta ígwè-plastic . Dika o doro anya site na aha, a na-etinye ha na nbata nke ụlọ ọ bụla. Ọtụtụ mgbe a na-eji ha arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie na ụlọ ndị dị otú ahụ abụghị ihe a na-ahụkarị. Na mgbakwunye na ngwa ngwa, enwere ike ịnweta ọnụ ụzọ dị iche iche na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ndị na-ekpuchi ọnụ, mkpuchi ndị ọzọ. Dịka atụmatụ ya si dị, ọnụ ụzọ ígwè-plastic nwere ike ịbụ otu na okpukpu abụọ, ịgbagharị, ịcha na ọbụna na-atụgharị.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe dị elu dị ọcha ma na-eguzogide mmiri na-ekwe ka iji ibo ụzọ ígwè-plastik rụọ ọbụna maka ime ụlọ ịwụ ahụ.
Imepụta ụzọ ụzọ ígwè-plastic
N'ezie, anyị apụghị ikwu na ọnụ ụzọ ígwè-plastik nwere ike ịbanye n'ime ime ọ bụla n'ụzọ dị mfe. A sị ka e kwuwe, nkà na ụzụ nke mmepụta ha na-enye gị ohere ịmepụta ụzọ site na plastik acha odo odo, laminate na ụdị osisi dị iche iche. E nwere nhọrọ maka ịmepụta akụkụ dị n'ime na n'ime ime dị iche iche ma ọ bụ na-ahapụ ọcha n'ime ime (agba agba), na mpụta - dịka nṅomi maka otu ụdị osisi. Enwere ike mechaa profaịlụ site na arịrịọ nke onye na-azụ ahịa ma ọ bụ iko iko, ọ bụghị ịkọwa na ọdịdị nke akwukwo akwukwo n'onwe ya nwere ike ịbụ ihe ọ bụla, ọbụna nke kachasị mma.
Nri iri nri - onye ịhọrọ?
Mbadamba mgbidi kichin
Iche na brik
Stools maka kichin
Ime ụlọ na foto na akwụkwọ ahụ aja
Kedu ka esi esi kpoo ọnụ n'elu ụlọ?
Igbe nke Wenge
Agba maka kichin
Stucco akpụrụ akpụ
Okpokoro ihe eji esi nri
Nri na-esi ísì ụtọ
Gịnị mere nrọ banyere ịgwakọta agwọ?
Mee maka nzukọ
Kedu ka esi eto pea ose oji?
Uwe ejiji ogologo oge 2014
Risotto na kọlịflawa
Kedu ihe ka mma - ntụ ntụ ma ọ bụ ntọala?
Oghere maka ụmụaka
Atheroma nke isi awọ
Ememe na South Korea
Rosemary - ngwa
Nkasi obi maka umu amuru
Onye nlekọta bụ nnukwu bikini
Tarot Thoth - nke pụtara kaadị dị iche iche
Kaya Gerber mere ememe ka a hapụ ya na nwanne ya nwoke na ndị enyi ya
Ọgwụ nke aṅụrụma na-enweghị ihe ọmụma nke onye ọrịa ahụ
Kulesh si millet - uzommeputa
Mmekọahụ nke nwanyị
Otu narị azụ azụ: otú ndị mmekọ Hollywood na-agbali ịbanyeghachi
Kedu ihe ị ga-eyi akwacha odo?